कोरोना भाइरस र अमेरिका – दिव्य रोशनी अनलाईन
कोरोना जनावरमा हुने भाईरस हो। यो भाईरस चीनको वुहान प्रान्तको “सी मार्केट” बाट फैलिएको हो । कोरोना भाइरस जेनेटिक भाइरस हो। यो जनावरबाट मानिसमा सजिलै सर्न सक्छ। जनावरबाट मानिसमा सजिलै सर्न सक्छ। यो भाइरस चिसो देशमा बढी फैलिएको देखिन्छ। कोरोना रुघाखोकी गराउने भाइरस हो। यसबाट संत्र,मित मध्ये ४ प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। जसमा अधिकांश ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समुहका छन्।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो भएका व्यक्तिलाई यो भाइरसले खासै असर नगर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। डब्लुएचओका अनुसार मुटु रोग, चिनी रोग, क्यान्सर, रक्तचाप जस्ता समस्याबाट पीडितहरुमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई कोरोनाले धेरै असर गर्न सक्नछ। निमोनिया गराउने, फोक्सोमा पानी जम्ने, शरीरको अन्य अंगले काम गर्न छाड्ने र मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ।
कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हावाको माध्यमबाट सर्दैन। यो हावामा उड्न सक्दैन। भाइरस लागेको व्यक्तिको कफ, सिंगान, थुकका छिटामा यो भाइरस हुन्छ। कोरोना भाइरस भएको व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा, सिंगान पुछ्दा उक्त व्यक्तिबाट भाइरस बाहिर आउछन्। तर मरेकोभने हुँदैनन्। भाइरसलाई बाँच्न सक्ने उपयुक्त वातावरण मिल्योभने यिनीहरु एकदुइ दिनसम्म पनि बाँच्न सक्छन्। तर यति समयसम्म बाँच्न सक्छन्भने यकिन अहिलेसम्म भएको छैन। यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। चीनबाट शुरु भएर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रुप लिएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहेको तथ्यांक आउन थालेपनि विश्वका अन्य देशमा यसको बिस्तार नरोकिएकाले यसबाट भयभीत हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। महामारी फैलिंदा आम मानिसमा भयभीत सँगसँगै फैलिरहेको हुन्छ। भाइरसको संक्रमणबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम यो पहिलो होइन। यसअघि पनि भाइरसका कारण यस्ता महामारी विश्वले भोगिसकेको छ। तर यो नयाँ खाले भाइरस भएको र विश्वका १ सय ६० भन्दा बढी देशमा फैलिरहेको छ। कुनैपनि महामारी फैलिंदा त्योसँगै जोडिएर विभिन्न हल्ला बढी नै फिजिएका हुन्छन्। कुन सहि तथ्य हो ? कुन हल्ला हो ? कुन कुरा आधिकारिक निकाय वा सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञले भनेका छन् भनेर पर्गेल्न सकिएनभने त्यसले जोकोहीलाई पनि तनावमा पुर्याउनेछ। सोसल मिडियाको बढ्दो प्रयोगसँगै कोरोना भाइरससँग सम्बन्धीत तथ्यपरक विषयभन्दा हल्लाका भरमा पोष्ट गरिएका भ्रम पार्ने विषयले धेरैको ध्यान तानिरहेको अवस्था छ। यो भाइरस लागेपछि मरिहालिन्छ, यसको कुनै उपचार छैनदेखि लिएर गौमुत्र, लसुन, रक्सी सेवन लगायत थुप्रै घरेलु उपाय अपनाउँदा भाइरसबाट जोगिन सकिने अवैज्ञानिक हल्ला फिंजाएर मानिसलाई तनावमा धकेल्ने काम भइरहेको छ।
विपद् तथा महामारीका बेला तनाव लिएर थप जोखिममा पर्नेभन्दा पनि कसरी सतर्क भएर जोगिने भन्नेतिर ध्यान जानु जरुरी छ। महामारी तथा विपदका बेला सम्प्रेषण गरिने सूचना तथा समाचार मानिसलाई तर्साउनेभन्दा पनि महामारीबाट कसरी जोगिने भन्नेमा नै केन्द्रीत हुनुपर्छ।
नेपालमा अहिलेसम्म एउटा मात्र केश देखिएको त्योपनि उपचारपछि निको भएको र करिब ५ सयवटा नमुना चेक गर्दा सबै नेगेटिभ आएको अवस्थामा जनजीवन ठप्प पार्नेगरी तर्साउने निर्णय लिन जरुरी छैन। जोखिममा रहेका उमेर समुहका मानिसलाई केयर गर्ने मेकानिजम, सरसफाइमा जोड तथा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालको जीवनशैलीका लागि आम मानिसलाई सही जानकारी दिने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ। कोरोनाको संक्रमण हुनु कता छ कता, संक्रमण भयो कि भनेर तनाव लिएर मानसिक समस्या निम्तिने जोखिमबाट जोगिनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।
कोरोना अन्य फ्लुजस्तै एकप्रकारको फ्लु नै हो। यसले कमजोर स्वास्थ्य भएका, वृद्ध र अन्य रोगबाट ग्रसितहरुलाई नै बढी आक्रान्त पारेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई बढी हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ। त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे हाल आएर टिका टिप्पणी भइरहेको छ। ग्लोबल टाईम्सका अनुसार चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरुको नयाँ अध्ययनले नोबल कोरोना भाइरस मानवबाट मानवमा नोभेम्बरको अन्त्यमा बुहानको सामुद्रिक बजारभन्दा बाहिरबाट शुरु भएको देखाउँछ। खासगरी भन्नेहोभने चीन चीन र जापानका सञ्चारमाध्यमका समाचार अनुसार यो भाइरसको उद्गमस्थल अमेरिका नै हुन सक्छ। चीनका वरिष्ठ श्वास–प्रश्वास विज्ञले भनेका छन्–“कोभिड–१९ चीनमा पत्ता लागेको भएतापनि यसको अर्थ यसको उद्गमस्थल कुनै ठाउँ अर्थात् कुनै अरु मुलुकमा भएको हुनुपर्छ।” जापानले प्राकृतिक विरुद्ध मानव निर्मित र भवितव्य विरुद्ध स्वभाविक प्रश्नहरुप्रति निषेध गर्दै सरल हिसाबले कोरोना महत्व अमेरिकाबाट उत्पत्ति भएको हुनसक्छ भनेको छ।्
ताइवानी भाइरोलोजिष्ट भन्छन्–“ कोरोना भाइरसको उद्गम थलो अमेरिका हो।” ताइवानमा सञ्चालित टिभी कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको उद्गम थलो अमेरिका भनिएको छ। जापानको सञ्चार माध्यमहरुको कोरोना भाइरसको उद्गम थलो अमेरिका हुनसक्छ भनिएको छ। सन् २०२० को फेबु्रअरीमा जापानको आशी न्युज रिपोर्टले दाबी गरे अनुसार कोरोना भाइरस अमेरिकामा उत्पत्ति भएको हो। चीनमा होइन र १४ हजार अमेरिकीहरुको इन्फ्लुएञ्जाबाट मृत्यु भएकोमा त्यसको कारक कोरोना भाइरस हुनसक्छ। (ल्यारी रामा नोफ) जापानीज सञ्चारमाध्यमले “चीनलाई एक्ल्याउन अमेरिकाले कोरोना भाइरस बनाएको दाबी समेत गरेका छन्।
पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरुले चीनलाई केन्द्रित गरेर सम्प्रेषण गरेका अनगिन्ती समाचारका कारण विश्वले नै कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनबाट अरु मुलुकमा फैलिएको विश्वास गर्यो तर अहिले आएर यो गलत साबित भएको छ। (लेखक श्रेष्ठ धरान १६ निवासी हुन्)
(विभिन्न स्रोत अध्ययन अनुसन्धानबाट तयार पारिएको लेख)
← नङको सौन्दर्य
लकडाउनमा बालबालिका माथि हुने हिंसा र अभिभावकको भूमिका →